Howard digs in after hitting Mbeke's gambit for six - smh.com.au
By Mark Riley, Political Correspondent in Washington
The Prime Minister, John Howard, has asked his Commonwealth colleagues to reject pressure from South Africa to reinstate Zimbabwe, as security concerns threaten the World Cup cricket competition in Africa.
Mr Howard has written to Australia's Commonwealth partners, saying that Zimbabwe has not done anything to justify a review of its expulsion from the Commonwealth last March.
He has moved to head off an attempt by the South African President, Thabo Mbeke, to have Zimbabwe, his fellow World Cup host nation, reinstated to full membership as the competition begins.
Mr Howard said he took an unexpected call from Mr Mbeke at the weekend while on a short layover in Hawaii, en route to Washington for meetings on Iraq.
He said Mr Mbeke argued there had recently been significant advances in Zimbabwe. Mr Howard rejected that view.
Mr Howard chairs a Commonwealth troika dealing with Zimbabwe, and has found himself in a minority of one against the others, Mr Mbeke and the Nigerian President, Olusegun Obasanjo.
The security situation in Zimbabwe has cast a pall over the World Cup, which opened in South Africa this week and is scheduled to include matches in Zimbabwe and Kenya.
The Australian Cricket Board has decided the national side should play its match against Zimbabwe in Bulawayo on February 24, despite pressure from Mr Howard for them to pull out.
The English team pulled out of its match against Zimbabwe in Harare on Thursday because of security concerns.
Mr Mbeke told Mr Howard at the weekend that he did not see any future for the troika if it could not reach agreement on Zimbabwe. Mr Mbeke has been pushing for England, Australia and New Zealand to drop their fears about the World Cup matches in Zimbabwe.
Mr Howard said he rejected the South African leader's view that the President of Zimbabwe, Robert Mugabe, had done enough to justify readmission to the Commonwealth.
"If anything, the situation appears to have deteriorated and I certainly wouldn't be supporting any notion that Zimbabwe should be readmitted to full membership or full participation in the Commonwealth," he said.
He would encourage his Commonwealth colleagues to delay any reconsideration of Zimbabwe's status until the next scheduled meeting of the Commonwealth heads of government in Nigeria in December.